नेपालमा बलात्कार महिलाको हुन्छ कि जातिको ? – असोक दर्नाल:: Sanchar Garage
नेपालमा बलात्कार महिलाको हुन्छ कि जातिको ? – असोक दर्नाल
कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका २ खोल्टीकी १३ वर्षीया किशोरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि गरिएको हत्याले आन्दोलनको स्वरुप ग्रहण मात्र गरेन न्याय प्राप्तिको आन्दोलनमा कञ्चनपुर भीमदत्त नगरपालिका –१८ भगतपुरका १४ व
र्षीय सनी खुनाको प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु समेत भयो । उनलाई शहिद घोषणा गरियो ।
यी घटनाहरुमा न कुनै मानवअधिकारवादीहरु माइतीघर मण्डलामा जम्मा भए, न कुनै महिला अधिकारवादीहरु योजनाबद्ध आन्दोलनमा उत्रिए । न त कुनै आन्दोलनले दलितमाथिका हत्याराको मृत्युदण्डको माग गर्यो । न त कसैले संसदमा विशेष महत्वको प्रस्ताव दर्ता गरे । बरु उल्टै सरकारले हत्यारालाई समातेर विना कारण छाडिदिएकोछ । यसो भएपछि कहाँबाट दलित पीडकले सहज रुपमा न्याय पाउँछन ? सरकारले आफैले घोषणा गरेको क्षतिपूर्ति समेत दिन आनाकानी गरेका थुप्रा उदाहरण बोकेर दलित समुदाय हिंडिरहेकाछन् । पछिल्लो समय नेताहरु दलितमाथिको उत्पीडनका घटनामा बोल्नै छाडेकाछन्। हिजो क्रान्तिकारी कुरा गर्ने माओवादीले अहिले दलित मुद्दा छाडिसकेको छ । गठबन्धनधारी नेकपाको संगठनको एकता प्रक्रियाले दलित नेताहरु तीनतिर फर्किएर बसेकाछन् । माओवादीभित्र प्रखर दलित नेताको रुपमा चिनिएका आहुतिले नयाँ पार्टी बनाएपछि प्रचण्डसंग सिधासिधा कुरा गर्ने नेता अहिले त्यहाँ छैन । नेकपाभित्र प्रधानमन्त्री ओली निकट छविलाल विश्वकर्माबाट धेरैले आशा गरेपनि उनलाई पार्टीले पटक पटक चिप्लाउने गरेकोले उनलेपनि पार्टीभित्र दलित मुद्दालाई बलियो ढंगले उठाउन सकिरहेका छैनन । प्रतिपक्ष कांग्रेसले दलित मुद्दालाई प्राथमिकतामै राखेको देखिदैन । दलित समुदायमाथि भएको हत्यादेखि जातीय विभेदका श्रृंखलाबद्ध घटना दिनदिनै बढिरहेकाछन् तर प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभामा रहेका दलित प्रतिनिधिले सरकारलाई चुनौती दिने गरी मुद्दाहरु उठाउन सकेका छैनन् ।
माया विकको दबाब बलियो नहुँदा सरकारले दिने राहतमा समेत विभेद देखियो । प्रदेश सरकारले माया विकलाई राहत स्वरुप ५ लाख दिने निर्णय गर्दै गर्दा निर्मला पन्तको परिवारलाई केन्द्रिय सरकारबाट १० र प्रदेशबाट ५ र वडाबाट ३ लाख राहत दिने घोषणा गरेका छन् । यो दबाब र आन्दोलनको उपलब्धी हो । हुन त बलात्कारको क्षति पैसाले पुर्ति गर्ने कुरै भएन । तर राज्यले पीडितलाई राहतस्वरुप केहि सहयोग दिने ब्यवस्थामा समेत आन्दोलन र दवावले ठुलो अर्थ राख्दो रहेछ भन्ने उदाहरण निर्मला र मायाको बलात्कार प्रकरणले प्रष्ट पारेकोछ ।पन्तको घटनामा स्वंय प्रधानमन्त्री तातेकाछन् । गृहमन्त्री बोले । प्रहरी प्रमुख उनको घरमा दौड लगाईरहेकाछन् । अधिकारकर्मीहरु पन्तको घरमा पुग्न तछाडमछाड गरिरहेकाछन् । यदि मायाको घटनामा पनि अधिकारकर्मीहरुको सक्रियता निर्मला जत्तिकै उभारपूर्ण भएकोभए उनको गरिब परीवारले पाउने ‘क्षतिपूर्ति रकम ‘ बढी हुनेथियो र पीडकमाथिको दवाव पनि त्यतिकै बलियो भएर जानेथियो ।
साभार -दलित अनलाइन बाट